इटालियन प्रहरीले लगाएको गुलाबी मास्कको किन हुदैछ विरोध ?
२०७८ पौष ३० शुक्रबार
रोम । इटालीको प्रहरी संगठनले अधिकारीहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि दिइएको मास्क गुलाबी हुन नहुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अधिकारीहरूले यो रङ प्रहरीको पोशाकसँग नमिल्ने र यसले ‘संस्थाको पोशाकसम्बन्धी नियमलाई हानि पुर्याउने जोखिम’ रहेको चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार अनलाइनमा प्रकाशित राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा एसएपी (साप) युनियनका प्रमुखले एफएफपी–२ मास्कको रङ छनोटसम्बन्धी कमजोरीलाई लिएर कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ ।
स्टेफानो पाओलोनीले भने, “पुलिस प्रबन्धकहरूले ‘आफ्ना अधिकारीहरू’को सजावट संरक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई एकरूपको लागि विचित्र र संस्थाको छविलाई हानि पुर्याउने जोखिममा सुरक्षात्मक उपकरणहरू (मास्क) सँग संस्थागत क्रियाकलापहरू गर्ने आदेश नदिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
सेतो, नीलो वा कालो जस्ता अन्य रङहरू धेरै हदसम्म नीलो भएको वर्दीसँग मिल्दोजुल्दो हुने तर गुलाबी मास्क प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव पत्रमार्फत् उनले दिए ।
इटालेली सञ्चार माध्यमले उद्धृत गरेको सँगैको एउटा नोटमा संगठनले गुलाबीसँग यसको कुनै विशेष मुद्दा नभएको तर अधिकारीहरूको वर्दी विनियमित गराएको दावी गरिएको छ ।
यद्यपि यस बिषयबारे उप–पूर्वाधार मन्त्री टेरेसा बेलानोभाले ट्वीटरमा ‘रंगीबिरंगी मास्क लगाउनुमा कुनै अमर्यादित कुरा छैन’ भनकी छन् ।
बेलानोभाले भनेकी छन्, “पोशाकको सम्मान रंगबाट होइन, तर लगाउने पुरुष र महिलाको काम गर्ने तरिकाबाट हुन्छ ।”
लगभग २०,००० सदस्यहरू वा पाँचमध्ये एक इटालेली प्रहरी अधिकृत सङ्गठित भएको संगठन एसएपीले गुलाबी मास्क इटालीको उत्तर र सिसिलीमा विभिन्न एकाइहरूमा वितरण गरिएको बताएको छ ।
कोरोनभाइरसको फैलावट रोक्न इटालीका सबै सार्वजनिक स्थानहरूमा मास्क लगाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा उच्च श्रेणीको एफएफपी–२ मास्क अनिवार्य गरिएको छ ।
इटालीले जफत गर्यो पुटिनको सुपरयाच !
काठमाडौँ । इटालीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग जोडिएको कथित सुपरयाचलाई बन्दरगाह छोड्नबाट रोक्न आदेश दिएको छ । इटालीको अर्थमन्त्री ड्यानियल फ्रान्कोले सुपरयाचको मालिक रुसी सरकारसँगको सम्बन्ध रहेको र युरोपेली संघको
इटालीको सुन्दर गाउँ, जो स्वतन्त्र देश बन्न चाहन्छ !
काठमाडौँ । इटालियन रिभिएराको एउटा सुन्दर पहाडको टुप्पोमा स्वतन्त्र देश बन्ने सपना बोकेको एउटा सानो गाउँ रहेको छ सेबोर्गा । सेबोर्गाको रियासत पहिले नै यसको आफ्नै झण्डा, राष्ट्रिय गान, राहदानी,
इटाली लगातार दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुन असफल
काठमाडौँ । इटाली यस बर्ष कतारमा हुने विश्वकप फुटबलमा छनौट हुन असफल भएको छ । युरोपको छनौट अन्तर्गत प्लेअफका लागि भएको खेलमा उत्तरी म्यासेडोनियासँग १-० गोल अन्तरले पराजति भएपछि इटालीको विश्वकप
इटालीले रूसी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्ने उपायको खोजी गर्दै
रोम । सरकारले रूसको ग्यासमाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उपायको खोजी गरिरहेको इटालीका प्रधानमन्त्री म्यारियो ड्राघीले मङ्गलबार इटलीको संसदलाई जानकारी गराएका छन् । रूस–यूक्रेनबीचको सैन्य द्वन्द्वका कारण यूरोपमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने
लमजुङका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव